i-verizon ivala izitolo okungezenkampani; abanye abathengisi abagunyaziwe bahlala bevulekile
none Izindaba Nokubuyekezwa IVerizon ivala izitolo eziphethwe yinkampani; abanye abathengisi abagunyaziwe bahlala bevulekile
IVerizon ivala izitolo eziphethwe yinkampani; abanye abathengisi abagunyaziwe bahlala bevulekile
I-wireless opharetha enkulu kunazo zonke e-United States, iVerizon, ivala ezinye zezitolo zayo ezithengisa i-coronavirus esakazeka ngokushesha. Le nkampani ayinikanga ngohlu lwezitolo eziphethwe izinkampani ezihlala zivulekile. Ungaya kuwebhusayithi yeVerizon & apos; , shaya ngekhodi lakho le-zip, bese uthola ukuthi yiziphi izindawo ezisasebenza. Edolobheni lasePembroke Pines, eFlorida, zonke izitolo eziphethwe yizinkampani ziyavalwa ngenkathi abathengisi abaningana abagunyaziwe beVerizon bevulelwe ibhizinisi. Okufanayo kusebenza ezitolo zakwaVerizon eNew York City, futhi nakulo lonke izwe.
UVerizon uthi abasebenzi bayo abathengisayo bazosebenza kusuka emakhaya besiza amakhasimende online (ngengxoxo yesikhathi sangempela) nangocingo. Njengoba abantu abaningi ezifundazweni betshelwa ukuthi basebenze ekhaya, othwala ulindele ukwanda okukhulu kwezimoto ezingenazintambo futhi usekhiphe okwesikhashana imali ekhokhelwayo namakepisi. I-Verizon, kanye ne-AT & T, T-Mobile, ne-Sprint, isayine iThe Keep Americans Connected Pledge ; kuze kube nguMeyi 13, opharetha abangenazintambo bathembisa ukungawashisi ama-akhawunti abathengi namabhizinisi amancane abakwazi ukukhokha izikweletu zabo. Izimali ezikhishwe ngemuva kwesikhathi sezisusiwe esikhathini esiyizinsuku ezingama-60 kanti izindawo zokuhlala ezingama-Wi-Fi zenziwa zitholakale kubo bonke.
Imicimbi eminingana ehlobene nomkhakha weselula ihanjiswe ku-inthanethi njengeGoogle nezingqungquthela zonjiniyela zonyaka. IGoogle I / O bekufanele ibanjwe kusukela ngoMeyi 12 kuya kuMeyi 14 eMountain View ngenkathi i-Apple & apos; s WWDC ngokwesiko ibanjwa ekuqaleni kukaJuni. I-Facebook futhi i-86 & apos; d yayo yonjiniyela confab. Ngasekuqaleni konyaka, i-Mobile World Congress (MWC) eBarcelona ikhanseliwe iphoqa abakhiqizi bezingcingo abaningana ukuthi baphoqelele ukwethulwa kwamadivayisi amasha.
Isikhulu esiphezulu sakwaVerizon uHans Vestberg sibhale incwadi lokho bekuphrintwe kuwebhusayithi yenkampani & apos; Isikhulu sabhala sathi, 'Ngesikhathi salolu bhubhane sonke siyakhuthazwa ukuthi sizijwayeze ukuxhumana nabantu ukuze sinciphise ukusabalala futhi senze ijika libe lula. Ngesonto eledlule, sisebenzise isu lokusebenzela ekhaya futhi manje silikhulisa ngokushesha lifaka amalungu amaningi eqembu lethu. Njengengxenye yesigaba sethu esilandelayo, sinciphisa inani lezitolo zakwaVerizon ezihlala zivulekile. Kodwa-ke, amakhasimende ethu asengathola ukwesekwa nezinsizakalo abazidingayo 24/7 ngokuvakashela iverizonwireless.com/support/, ngokushayela ku-800.922.0204 noma ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-MyVerizon. '
t umbhalo wokufaneleka wokuthuthukisa iselula
I-pixel 2 ikhamera vs iphone x
Ungayinika kanjani amandla imodi yonjiniyela nezinketho ku-Samsung Galaxy S6, Qaphela 5 (okokufundisa kwe-Android TouchWiz)
I-Apple & apos; s iPhone 11 Pro yehlela ku- $ 0 kwisivumelwano esisha esimangalisayo esingadingi ukuhweba
Ungayicisha kanjani futhi uyiqale kabusha i-Galaxy Note 20 ne-Note 20 Ultra
Ungayilungisa kanjani i-fake 'Gym is under attack' notification glitch in Pokemon GO
AbakwaSamsung & apos; s Galaxy Tab S7 ne-S7 + (5G) bakhuphukela ku-oda langaphambilini: nazi amadili amahle kakhulu wokuqalisa
Izivikeli zesikrini sengilazi ezihamba phambili ze-iPhone X
Amakhasimende amaningi eRobinhood alahlekelwe yiyo yonke imali yawo, kepha hhayi emisebenzini emibi
Amacala e-Samsung Galaxy Note 5 ne-Samsung Galaxy S6 EDGE + ayavuza
I-Galaxy S10 & apos; s PowerShare yokushaja isivinini sokushaja nge-Samsung Buds ne-Watch Active
Uhlelo lokusebenza luzokuvumela ukuthi uthule uthuli futhi usebenzise i-Pebble Watch yakho endala ngocingo olusha lwe-Android